मोबाइल किन्दै हुनुन्छ या तपाईको फोन सक्कली कि नक्कली कसरी थाहा पाउने ? जानी राखौ – पुरा पढ्नुहोस्……
मोबाइल किन्दै हुनुन्छ या तपाईको फोन सक्कली कि नक्कली कसरी थाहा पाउने ? जानी राखौ
देख्दा दुरुस्तै देख्दैमा त्यस सामानको गुणस्तर एउटै नहुन सक्छ । हामी मोवाइल चलाउन त जान्दछौ तर हामीहरुलाई आफूले बोकेको मोबाइल सक्कली हो कि नक्कली भन्ने छुट्याउन अत्यन्तै कठिन हुन्छ ।
मोबाइल किन्ने बेलामा त मोबाइल पसलेले नक्कली हो भन्ने कुरा आउँदैन उसले सबैजसो मोबाइललाई सक्कली नै भनिरहेको हुन्छ । यदी हामी त्यस कुरामा अनविज्ञ भएमा हामी सहजै ठगिन सक्छौ ।
त्यसकारण मोबाइल सक्कली र नक्कलीमध्ये कुन हो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ केही उपायहरु तपशीलमा रहेका छन् ।
नक्कली स्मार्टफोनको स्पिड असली स्मार्टफोनको तुलनामा कम हुन्छ । यसलाई सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । फेक स्मार्टफोनमा सफ्टवेयरको सहयोगले त्यसको हार्डवेयर डिटेल बदल्न सकिन्छ ।
त्यस्तै यस स्मार्टफोनको पहिचान फिचर्सको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । सक्कली स्मार्टफोनमा जुन फिचर्स हुन्छ, नक्कलीमा हुँदैन ।
लोगो ठिक छ छैन रु डिजाइनमा कुनै गडबड पो छ कि रु त्यती मात्र होइन, फोनको बक्स निकालेर त्यसको प्याकिङ र वारेन्टी पेपर पनि ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् । –न्युज२४नेपालबाट
Prev११ वर्षे बालकका पाँचै औंला सुक्दै झर्न थाले, ६ लाख पनि सकियो, अझै निको भएन – हेर्नुहोस् दर्दनाक भिडियो
Nextपत्रकार ऋषि धमला भन्छन्, ‘रबि लामिछानेलाई पत्रकारिता नै ठिक छ’ (भिडियोसहित)
बाम गठबन्धन अब ठूलो पार्टीको रुपमा अघि बढ्छ भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले खुलाए देश विकासको यस्तो बाटो (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
‘चादनीमा नुहाएर’ बोलको गीतमा ५ वर्षीय सृष्टीको दमदार अभिनय -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)